Moments Neshamwari 12
Tsvaga zvimisikidzo zveMmaoms neFashamwari
Copyright, 1908, neHW PERCIVAL.
Kana iri ichokwadi kuti hapana asi kunze kwehombodo, zviputi uye masangano asingabviri manas anoonekwa, maererano nedzidziso dzeanosophika, pamisangano, kubva kupi kunobuda ruzivo uye dzidziso dzemafirosofi uye anowanzo dzidziso dzouMwari, izvo vamwe vasvikiro vasina mubvunzo vakagamuchira?
Kudzidzisa kwerudzi chero rupi kunotakura kukosha kwayo mukati kana mukati mayo. Dzidziso dzese dzinofanirwa kutongwa pamusoro pezvakakosha, zvisinei nekwavanobva kana masimba. Zvinoenderana nesimba reuyo anogashira dzidziso yekuti kana achikwanisa kutonga dzidziso yacho kukosha kwayo chaiko. Dzimwe dzidziso dzakatarisana nezviso zvavo pane zvese zviripo kwavari, nepo zvimwe zvichitariswa mukati, kufunga pamusoro uye kusunganidzwa iro rechokwadi risati razivikanwa. Kazhinji kacho masvikiro anogunun'una uye anoteedzera pamashure, uye vateereri vanogamuchira kutaura uku vachishamisika. Dzimwe nguva svikiro rinogona kugamuchira kana kudzokorora hurukuro yehunyanzvi, iyo inonzi inodzvanyidzwa neimwe kudzora. Kana kudzidzisa kwehuzivi kana kwehumwari hunopihwa kuburikidza nesvikiro, zvinogona kunzi kubva kune wepakati wepakati ego, kana kubva kumurume akangwara achiri kurarama mumuviri, kana kubva kune iye akadzidza kuzvipatsanura uye kurarama musiyano. kubva mumuviri wenyama, kana kungave kunobva kune iye wakasiya hupenyu huno, asi asina kuzvinatsa kubva pachishuvo chake chemuviri chinobva chamubatanidza nenyika uye iye angave asiri pasi pegariro rekupererwa neakajairwa nemunhuwo zvake. munguva uye mushure mekufa.
Kudzidzisa kwakakodzera panguva kunogona kubva kune chero eichi zvinyorwa, kubudikidza nesvikiro, kungave pachivanzika kana kwete. Asi haimbofanirwe kudzidziswa kuve yakakosheswa nekuti kunobva kune kwainobva kune iro kunonzi se "chiremera"
Unoita basa rakafa pachako here kana kuti pamwe chete kuti uwane imwe mugumo?
Tinorevei tichiti “vakafa?” Muviri unofa uye wobva wanyungudika. Izvo hazvishande mushure mekufa uye fomu rayo rakanyungudutswa kuita mweya mutete. Kana na “vakafa” zvairehwa zvishuwo zvemunhu, saka tinogona kutaura kuti vanopfuurira kwenguva, uye zvishuvo zvakadaro zvevanhu zvinoramba zvichienderera mukuedza kwavo kuwana chinhu chavo kana zvinhu. Mumwe nemumwe wevakafa vakadaro vanofanirwa kushandira magumo ake, nekuti seumwe neumwe unoshandira kuchiva chavo havana hanya nekuwana mhedzisiro yevamwe. Kana kune rumwe rutivi, ne "vakafa" zvichireva chikamu icho cheuyo chinoramba chichibva kubva kuupenyu kuenda kuupenyu, saka tinoti chingararama mushure mekufa munyika yezvibodzwa zvayo zvakavakirwa naiye, uye nekunakirwa kwake , kana pfungwa dzayo dzingave dzakadai sekuverengera muzvinangwa zvavo zvehupenyu hwevamwe, mune izvo mamiriro ezvinhu angave akafa achararama kunze kana kufadza pfungwa dzaakange aumba munguva yehupenyu hwepasi. Pasi rino inzvimbo yebasa. Vakafa vanopfuura vachipinda mune zororo gadziriro yokudzoka kwavo kupasi rino nebasa. Zvezvisaririra zvisingafi zvinoshanda kuburikidza nemiviri ino yepanyika, vamwe vanoshanda munyika ino kuwana mimwe migumo sevanhu vamwe, vamwe vachishanda pamwe chete kuti vasvike kumagumo. Imwe neimwe yekirasi yekutanga inoshanda noudyire kune yayo pachavo magumo. Imwe kirasi inoshanda mumwe nemumwe uye pamwe chete kuti zvifadze vese. Izvi zvinoshanda kune ese maviri emakirasi aya asina kuwana kusafa kwavo, zvichireva nekusafa kusagadzika uye kuenderera mberi kwekuziva kuvapo kuburikidza nenyika dzese nemamiriro ezvinhu. Zvakaita sevakawana kusafa muhupenyu hwazvino zvinogona kushanda mushure mekufa kwemuviri nekuda kwechinhu chavo chega kana chakanakira zvese. Hupenyu uhu ndiyo nzvimbo yebasa pasi rino kune munhuwo zvake munhu. Mudunhu kana afa haashande, sezvo ndiyo nguva yekuzorora.
Vakafa vanodya sei, kana zvachose? Chii chinotsigira upenyu hwavo?
Chikafu chinodiwa kuchengetedza huvepo hwemuviri chero wemhando. Matombo, zvidyarwa, mhuka, varume uye vamwari zvinoda kuti chikafu chirambe chiripo. Chikafu cheimwe hachisi chikafu chevose. Humambo hwega hwega hunoshandisa sechikafu umambo hwuri pasi payo uye hwunogashira chikafu cheushe huri pamusoro payo. Izvi hazvireve kuti muviri wese wehumambo chikafu cheumwe, asi kuti kukosha kwemitumbi iyi chikafu chinotorwa kubva kuumambo pazasi kana chinopihwa humambo kumusoro. Zvitunha zvevanhu zvinoshanda sechikafu chepasi, zvinomera, honye uye mhuka. Chikamu icho chakashandisa chikafu chinoramba chiripo nekudya, asi chikafu chechinhu chakadaro hachisi icho chikafu chakashandiswa kuenderera mberi nekuvapo kwemuviri wenyama. Mushure mekufa murume chaiye anoenda mune yekuzorora uye kunakidzwa, chete mushure mekunge azviparadzanisa kubva pakuchiva kwakanyanya kwehupenyu hwepanyama. Nekubatana kwake nezvishuwo izvi kuburikidza nekudyidzana nenyika yepanyama yaanopa kune izvi zvishuwo semufananidzo wemunhu uye izvi zvido zvinodya neimwe pfungwa, asi chete mupfungwa yekuti bhodhoro regirazi rinodya hwema hwekunhuhwirira hwahwakanga urimo. Aya ndiwo anowanzo kuve emitezo inoonekwa mushure mekufa. Vanoenderera mberi nehupenyu hwavo nechikafu. Chikafu chavo chinotorwa munzira zhinji, zvichienderana neicho chimiro chechisungo. Kusimudzira chishuwo ndechokudzokorora. Izvi zvinogona kuitwa chete nekusangana neicho chishuwo kuburikidza nemuviri wemuviri wemunhu. Kana chikafu ichi chakarambwa nevanhu vapenyu chishuwo chinozvipisa uye chinopera. Mafomu akadaro ekuda haadye chikafu chemuviri, nekuti haana zvekushandisa zvekutengesa chikafu chenyama. Asi chishuvo uye mamwe masangano, akadai semhando yezvisikwa, vanokurudzira hupenyu hwavo kuti hurarame nekunhuhwirira kwechikafu. Saka nepfungwa iyi vanganzi vanogara pane hwema hwezvikafu, iri mhando yakaomesesa yechikafu chavanokwanisa kushandisa. Nekuda kweichi chokwadi, mamwe makirasi ezve elementals uye akasarudzika zvisikwa zvechivanhu zvinokwezva kune dzimwe nharaunda nekunhuhwirira kunobva mukudya. Iyo grosser iko kunhuhwirira kwakanyanyisa kukadzika uye kwenyama kuchave iko chinokwezva; zvisati zvaitika vanhu, zvinhu zvepamberi, zvisikwa zvakasikwa zvinokwezverwa uye zvinofadzwa nekupiswa kwerusenzi. Kupisa rusenzi kunokwezva kana kudzinga makirasi akadaro kana zvimiro zvinoenderana nekwavo. Mupfungwa iyi "vakafa" vanganzi vanodya. Mune imwe nzira iyo nheyo yakafa yekuziva uyo anogara kudenga rake chairo kana mamiriro ekuzorora anganzi zvakare adye kuitira kuti aenderere mberi nekuvapo kwake munyika iyoyo. Asi chikafu chaanorarama ndechepfungwa dzakanaka dzeupenyu hwake; zvinoenderana nehuwandu hwepfungwa dzake dzakanaka, iye anopa chikafu chaanogamuchira kana afa. Chokwadi ichi chakafanofanidzirwa nevaIjipita muchikamu icho cheBhuku ravo reakafa umo chinoratidzwa kuti mweya mushure mekunge wapfuura nepaHoro yeViri Chokwadi uye wakayerwa pachiyero, unopfuura nemuminda yeAan Ru , apo inowana gorosi yekukura yemakumi matatu nemashanu uye manomwe manomwe kukwirira. Akaenda anongonakidzwa nenguva yekuzorora, hurefu hwayo hunotarwa nemifungo yake yakanaka achiri pasi.
Ko vakafa vanopfeka nguo here?
Ehe, asi zvinoenderana nekuumbwa kwemuviri uri kupfeka, wekufunga wakaumbwa ivo uye neunhu hwavanoda kuratidza. Zvipfeko zvemunhu chero murume kana dzinza chiratidzo chehunhu hwemunhu kana wevanhu. Kunze kwekushandiswa kwezvipfeko sekudzivirirwa kubva kumamiriro ekunze, vanoratidza zvimwe zvakasarudzika zvekuravira nehunyanzvi. Izvi ndizvo zvese mhedzisiro yemufungo wake. Asi kupindura mubvunzo uyu zvakananga, tingati zvinoenderana nenzvimbo mune vakafa kuti pane vanopfeka zvipfeko. Kana zvanyatsobatanidzwa mukufunga pamwe nenyika iyo sangano rakasiya richachengetedza tsika nehunhu hwenyika hwenzvimbo iyo hwakatamira, uye kana icho chakadaro chinogona kuoneka chingaonekwe mune zvipfeko zvainyanya kukodzera pakuchiva kwayo. Zvinoratidzika mune chipfeko chakadaro nekuti chero chichifunga chiri, kuti chaizove, uye zvipfeko izvo munhu zvaanga achapfeka zvakasikwa mukufunga kwake ndezviya zvaangadai akashandisa achiri mupenyu. Kana, zvisinei, pfungwa dzevakasiya dzikachinja kubva mune imwe mamiriro kuenda kune imwe, ipapo aizoonekwa mune zvipfeko zvaangave akafunga, kuti zvienderane nemamiriro acho. Nekudaro, nekuda kwekufunga kwevanhu, zvipfeko zvinorongerwa kuvanza hurema kana kugadzirisa chimiro, zvakaringana kuchengetedza kana kudzivirira kubva kune inopisa mamiriro ekunze, asi pane nzvimbo iyo munhu anopfuura nayo kana afa uye kwaanoonekwa sezvaari chaizvo uye kwete sezvipfeko zvaimuita kuti aoneke. Iyi nzvimbo iri muchiedza chemwari wake wemukati, iye anomuona sezvaari uye anotonga zvakafanira. Munzvimbo iyoyo munhu haadi zvipfeko kana chero dziviriro, sezvo iye asiri pasi kana kukanganiswa nepfungwa dzezvimwe zvisikwa. Saka “vakafa” vanganzi vanopfeka zvipfeko kana vachizvida kana kuti vanoda zvipfeko, uye vanganzi vanopfeka zvipfeko zvinodiwa kuti vadzivirire, kuvanza kana kuchengetedza miviri yavo zvinoenderana nemamiriro avari mairi.
Ko vakafa vanogara mudzimba here?
Mushure mekufa muviri wemuviri wakanyatsoiswa mubhasikiti waro wemapuranga, asi chimiro chemuviri, iyo astral body, hachigari mumba umo. Inoparara sezvinoita muviri nezveguva; zvakawandisa kune rumwe rutivi rwemuviri. Kana iri nhengo inogara mumuviri, inogara mumamiriro ezvinhu akadaro kana nharaunda izvo zviri zvakanyanya mukuchengetedza nemamiriro ayo. Kana iyo pfungwa yakakurisa yave yakadaro yekuikwevera kune imwe imba kana nzvimbo, iripo kungave mukufunga kana pamberi. Izvi zvinoshanda kune muviri unoda, asi chinzvimbo chinogara munyika chairo mushure mekufa - chinowanzonzi nedenga - chingagara mumba, zvichizvikonesa kufunga nezveimba nekuti inogona kupenda chero mufananidzo wainofarira. Imba kana paine yaizogaramo yaingave imba yakanaka, yakavakwa nekufunga kwayo, uye kwete nemaoko emunhu.
Ko vakafa vakarara here?
Rufu chairwo kurara, uye iko kurara kwenguva refu kana pfupi seiko kwakaitwa neakamboshanda pasi rino. Kurara inguva yekuzorora, kubvunda kwechinguvana kubva muchiitiko pane chero ndege. Pfungwa yepamusoro kana ego hairari, asi muviri kana miviri kuburikidza neinoshanda inoda zororo. Kuzorora uku kunonzi kurara. Saka muviri wenyama, nhengo dzawo dzese, masero uye mamorekuru anorara kana kuti ane nguva pfupi asi ipfupi, izvo zvinovatendera kuti vazviratidze pachavo nemagineti nemagetsi kune yavo mamiriro.